EXPLAY NAVIGATOR မှတဆင့်သင်၏ကွန်ပျူတာကို UPDATE လုပ်နည်း - ရေကြောင်း - 2019
ကွန်ပျူတာမှတစ်ဆင့်ရေကြောင်း Explay အပေါ် firmware ကိုအသစ်ပြောင်းခြင်း
ယနေ့အထိ Explay Navigator ကွဲပြားခြားနားသောမော်ဒယ်များ, ဒီအမျိုးအစားကအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ယင်း၏လျော်သောစစ်ဆင်ရေးများအတွက်တရားဝင် site မှ download ပြုလုပ်ရရှိနိုင်ပါသည်ထားတဲ့ဆော့ဖ်ဝဲကို manual မွမ်းမံ, လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်အသစ်က firmware ကို၏ installation အပေါငျးတို့သတစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။
Navigator Explay အပေါ် software ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်ပါ
ကြောင့်ရေကြောင်းအပေါ် Explay Navitel firmware ကိုအသုံးပြုကြသည်ဟူသောအချက်ကိုရန်, ထို့နောက်လက်ရှိဖြစ်စဉ်ကိုအချို့သောအခြား devices များအတွက် update ကို၏ installation လုပ်ဖို့အကြီးအကျယ်ဆင်တူသည်။ လုပ်နိုင်သော, သင်ကိုလည်းဘာသာရပ်ပေါ်မှာဤအပေါ်ယေဘုယျဆောင်းပါးကိုဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
မှတ်ဉာဏ်ကဒ်အပေါ် Navitel အသစ်ပြောင်းခြင်း
အသစ်ပြောင်းခြင်း Navitel Navigator အပေါ်
Update ကိုရေကြောင်း Prology
Method ကို 1: လက်စွဲစာအုပ်တပ်ဆင်ခြင်း
ဆုံးစွယ်စုံများနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာ Explay Navigator အပေါ် firmware ကို update လုပ်ပေးခြင်းတစ်ဦးရှုပ်ထွေးသောနည်းလမ်းဒေါင်းလုပ်ဖြစ်ပြီး Flash-drive ကိုရန်လိုအပ်သောဖိုင်များကိုဖြည့်စွက်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဤကိစ္စတွင်အတွက်, သငျသညျကို download လုပ်ပါဒါပေမယ့်လည်းစက်ပေါ်ရှိသစ်ကို software ကိုသက်ဝင်စေခြင်းငှါမသာလိုအပ်ပါတယ်။
ဆိုက် Navitel ပေါ်တွင်ရဲ့ login စာမျက်နှာကိုသွားပါ
အဆင့် 1: ဆော့ဝဲ Download
ဒီချဉ်းကပ်နည်း, သင်ဆိုက် Navitel အပေါ်မှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ်ရှိပြီးသားအကောင့်ကို log ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်လျော်သော link ကိုပြောင်းရွှေ့ကအတည်ပြုခံရဖို့အကောင့်သစ်အတွက်အဆိုပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်း။
သင့်အကောင့်အတွက်ဖြစ်ခြင်း, ပိတ်ပင်တားဆီးမှုကို click "ကျနော့်ရဲ့ Device များ (update ကို)".
သင်ယခင်ကသင်ချင်သော device ကိုသတ်မှတ်ထားသောရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါလျှင်, သက်ဆိုင်ရာ link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သူကထည့်ပါ။
သင်မော်ဒယ်ကိုအသုံးပြု devaysa နှင့်လိုင်စင် key ကို၏အမည်ကိုသတ်မှတ်ဖို့လိုအပ်ဘယ်မှာ။
အချို့ကိစ္စများတွင်, သင် Flash-Drive ကိုအပေါ်သတ်မှတ်ထားသောလမ်းကြောင်းမှာတည်ရှိပါတယ်သောလိုင်စင် key ကိုအတူဖိုင်ကိုသုံးနိုင်သည်။
Navitel အကြောင်းအရာ လိုင်စင်
သငျသညျ, အတိအကျညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီအပိုင်းဖို့အကူးအပြောင်းအရာအားလုံးကိုလုပ်ခဲ့တယ်လိုလျှင် "ကျနော့်ဖုန်းအတွက်" တပ်မက်လိုချင်သောအအညွှန်းစာရင်းထဲမှာဖော်ပြပါတယ်။ အပိုင်း "Update ကို" link ကို click နှိပ်ပြီး "ရရှိနိုင်တဲ့ Update ကို" နှင့်သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာဖိုင်ကိုသိမ်းဆည်းပါ။
အဆင့် 2: firmware ကိုလွှဲပြောင်း
သင့်ရဲ့ PC မှာသင့်ရဲ့ device ကို Explay ကနေ USB flash drive ကိုချိတ်ဆက်ပါသို့မဟုတ် USB-cable ကို mode ကိုသူတို့နှင့်အတူ ချိတ်ဆက်. "ကို USB FlashDrive".
ကိုလည်းကြည့်ပါ: အကို PC ရန်မှတ်ဉာဏ်ကဒ်ကိုချိတ်ဆက်ဖို့ကိုဘယ်လို
ထို့အပြင်သူကမမြင်နိုင်တဲ့အခက်အခဲများ၏ဖြစ်ရပ်မှာသူတို့ကိုပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်, တစ်ဦးက Flash-Drive ကိုအပေါ်ဖိုင်တွဲတွေနဲ့ဖိုင်တွေပွားရန်အကြံပြုသည်။
အသစ်က firmware ကိုအတူ archive ကိုအထုပ်နှင့်ရေကြောင်းကနေ USB flash drive ကိုရဲ့ contents ကူးယူပါ။ ထို့ကြောင့်ကကုမ္ပဏီနှစ်ခုမပေါင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတည်ပြုခြင်းနှင့်ရှိပြီးသားဖိုင်တွေအစားထိုးရန်လိုအပ်ပေသည်။
အထက်ပါလုပ်ရပ်များပြီးနောက် firmware ကို update လုပ်ပါလိမ့်မည်နှင့်ရေကြောင်းကိုထပ်သုံးနိုင်တယ်။ တခါတရံမှာသို့သော်လည်းငါတို့ကဒီ site ပေါ်တွင်အခြားဆောင်းပါးထဲမှာကိုပြောသည်ထားတဲ့ update ကိုမြေပုံများ, လိုအပ်သည်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Navigator Explay အပေါ်မြေပုံများအားကို update လုပ်နည်း
Method ကို 2: အလိုအလျောက် software ကို Install
Explay Navigator အပေါ် firmware ကိုမှ updates များကိုအလိုအလျောက်တပ်ဆင်၏အမှု၌, သင်သာတစ်ဦးကိုအထူးအစီအစဉ်ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်နဲ့ရိုးရိုးခြေလှမ်းများတစ်စီးရီးလုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဟာထောက်ပံ့ USB-cable ကိုတဆင့်ချင်းစီကတခြားကွန်ပျူတာနှင့်ရေကြောင်းချိတ်ဆက်ထားရပါမည်။
တရားဝင် site ကို Navitel ကိုသွားပါ
အဆင့် 1: Program ကို Download လုပ်ပါ
အပိုင်း၌ပေးထားသောလင့်ခ်ပေါ်တွင်အရင်းအမြစ်ရဲ့ start စာမျက်နှာကိုဖွင့် "ပံ့ပိုးမှု" ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "သင်၏ရေကြောင်းကိုအပ်ဒိတ်လုပ်".
ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအောက်မှာ "စနစ်လိုအပ်ချက်များကို" စာနယ်ဇင်းများ "ဒေါင်းလုပ်" ပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်ဖို့ update ကိုအစီအစဉ်ကိုဖိုင်ကိုတပ်ဆင်ရန်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တည်နေရာတစ်ခုရွေးချယ်ပါ။
ဒေါင်းဖိုင်ပေါ်တွင်လက်ဝဲဘက် mouse ကိုခလုတ်ကို Double-click နှိပ်ပြီးစံ Installer ၏အကြံပြုချက်များအတိုင်းလိုက်နာ, installation ပရိုဂရမ်ကို run ပါ။
box ကိုစစ်ဆေးသည် decompress လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအဘို့စောင့်ဆိုင်း "Run ကို" နှင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ပြီးပြီ"။ သင်တို့သည်လည်းကိုယ်တိုင် Desktop ပေါ်မှာကို double-click နှိပ်ခြင်းဖြင့် update ကို program ကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ပါ။
အဆင့် 2: Update ကို Firmware
အဆိုပါ firmware ကို update လုပ်ဖို့ pre-running software ကို, သင့်ရေကြောင်း Explay ရန်သင့် PC ကိုချိတ်ဆက်ပါ။ ဒါဟာ mode မှာအမှုကိုပြုရပါမည် "ကို USB FlashDrive".
အကျဉ်း update ကိုစစ်ဆေးမှုများလုပ်ထုံးလုပ်နည်းပြီးနောက်သင်ရေကြောင်းအပေါ်ဆော့ဖျဝဲ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုထည့်သွင်းဖို့သတိပေးခံရလိမ့်မည်။
တစ်ဦးလက်မှတ်နှင့်အတူမှတ်သားခလုတ်ကိုသုံးပါ "Update ကို"အဆိုပါ firmware ကို update ကို process ကိုစတငျရန်။
စံ installer ကိုရန်ညွန်ပြလိုက်နာပါ။ အပ်ဒိတ်ရဲ့အဆုံးမှာ, သင်နောက်ပိုင်းတွင်အသုံးပြုမှုအတွက် browser ကို disable နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါထည့်သွင်းစဉ်းစားချဉ်းကပ်မှုကြောင့်မလျော်ကန်သောလုပ်ရပ်များပျက်ကွက်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေလျှော့ချ, သင်ကိရိယာ၏ firmware ကို update လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ သို့သျောလညျးကိုတောင်အကောင့်သို့ဤယူပြီး, စောင့်ရှောက်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတလျှောက်လုံးကိုယူရပါမည်။
တစ်ခုချင်းစီကိုပေးအပ်နည်းလမ်းကိုသင်ရေကြောင်း Explay အပေါ်ဆော့ဖ်ဝဲကို update လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာသင်သည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်တစ်ဦးရွေးချယ်မှုစေရန်ရှိသည်, ထိုကိရိယာ၏မော်ဒယ်နှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဦးစားပေးခြင်းဖြင့်လမ်းပြတော်မူ၏။ သငျသညျမေးခွန်းများရှိပါကကျွန်တော်မှတ်ချက်များအတွက်သူတို့ကိုဖြေဆိုရန်ပျော်ရွှင်ကြလိမ့်မည်။